Bitsika Afgàna: Fampihavanam-Pirenena sy Ashura · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 15:26 GMT
Niresaka mikasika ny fampihavanam-pirenena i Askar Gu Raiz. Hoy ny nosoratan'ilay blaogera
Mino aho fa efa fanombohana tsara sahady ny fifanakalozan-kevitra tsotra manodidina ny resaka fifandirana tao anatin'ny telopolo taona lasa, sy ny fiaiken-keloka ankolaka nataon'ireo vondrona roa tonta izay nandray anjara tamin'ireo ady ireo sy tompon'andraikitra tamin'ny fanimbàna ary fandatsahan-drà, izay nahazoan'izy ireo famelan-keloka . Raha ny eritreritro, tsy dia tena hoe ratsy araka ny nahiantsika io vahaolana io raha afaka manitsy zavatra anankiroa ao isika, ary amboarina kely ny fomba fiteny azy.
Nilaza ny Notes from West fa ny vaovao nomen'ny media dia hoe nanome famotsoran-keloka ho an'ny tenany ireo voaheloka tamin'ny ady [Fa]. Hoy ilay blaogera manoratra:
Nivory ireo jihadista mpitarika hangatahana fampihavanam-pirenena izay narahana fihaonana iray hafa indray koa, iray volana lasa izay, tamin'izany no nanamelohan'ireo lehibe mpitarika ady ny tatitra momba ny heloka an'ady avy amin'ny Vondrona miady ho an'ny Fanajàna ny Zo Mahaolona (HRW).. Nametra-panontaniana ny blaogera hoe natao ve io famotsoran-keloka io noho ny fahefana ananan'ireo lehibe mpitarika ady sa noho ny fahatahoran-dry zareo an'ireo fikambanana miaro ny zo mahaolona.
Niresaka momba ny Ashura, ilay lanonana ara-pivavahana i Afghan Lord. Ashura, ny faha 10-n'ny Muharram dia andro masina iray ho an'ny Silamo ary andro miavaka ho an'ny Shiita. Andro iray miavaka amin'ny Muharram io andro io ary manan-danja tokoa eo amin'ny alimanakan'ny Silamo, andro fisaonana ho fahatsiarovana ny nampijaliana an'i Hussainn, zanaka lahin'i Ali sy ny lahimatoan'i Muhammad nandritra ny ady tsy nifandanja tao Karbala tamin'ny taona 61 (AD 680). Soratan'ilay blaogera, araka ny hita ao anatin ny lahatsary, hoe samy mandratra ny lamosiny, sorony ary tratrany amin'ny antsy maranitra ny olona ery amin'ny fiafaran'ireo rojovy. Mandratra ny tenany izy ireo amin'ny andron'i Ashura ho fanehoana ny fihetsehampony sy ho fahatsiarovana ny nampijaliana an'i Hussain. Eny na dia efa noraràn'ny mpitarika Silamo Shiita aza ny fandratràna tena dia mbola nitohy foana izany ary tsy nitsahatra velively. Tsy ho an'ny vahoaka Afgàna ihany io fa koa any amin'ireo firenena maro samihafa toa an'i Pakistana, Iràka, Palestina ary Iràna.
Nanampy izany i Afghan Lord
Tsara vintana aho ka afaka nanontany ny sasantsasany tamin'izy ireo – Nahoana ianareo no mively tena sy mandratsa-drà. Hoy ilay tovolahy iray; Maniry ny hahazo tombontsoa aho, efa nandratra ny tenako aho teo aloha ary misy antony ny hanaovako izany. Raha nanontany azy aho hoe inona no mba nofinofinao, dia nilaza tamiko izy hoe “te-hanambady aho, fa tsy manam-bola.” Nisy iray hafa nilaza tamiko ka nanao hoe “tsy mampijaly ny tenako aminà rojovy misy antsy maranitra ery amin'ny tendrony aho satria nanao izany tamin'ny taona lasa mba hahazoako vokatra, saingy tsy nahazo”.